“စကိတ်အရင်ကစီးဖူးလား`ဟုသူငယ်ချင်းများကမေးတော့ ဒီလိုရေခဲပြင်ကြီးကိုတောင် ခုမှမြင်ဖူးကြောင်းဖြေလိုက်ရ၏။ ကျွန်မ၏ခပ်ဆတ်ဆတ်နိုင်သောအသံကိုသဘောကျသည့်အလား ရယ်ကြရင်း စကိတ်စီးဖို့တက်ကြွနေကြသည်။ ကေးကတော့အေးစက်စက်နိုင်လှသောကျွန်မ၏ ဒဏ်ကိုခံနေကြပီပီ သူ့အတွက်သူမြန်မြန်ပြင်ဆင်နေ၏။ ပြီးလျင်သူများတွေနှင့်ကျွန်မပါ ပါနိုင်အောင် သူကျွန်မကိုကူညီရဦးမည်လေ။
ကျွန်မကတော့ ရေခဲပြင်ဖွေးဖွေးကြီးကိုကြည့်ရင်း ရေခဲပြင်ကြီးထက်ပိုပြီးအေးခဲမာထန်နေနေသည့် ကျွန်မနှလုံးသားကို ဆန်းစစ်နေမိသည်။ ကေးကသူ မကူညီနိုင်သည့်ကိစ္စကို ခေါင်းထဲမထားပဲ ကျွန်မဖိနပ်ကြိုးမျာကို သေချာချည်နှောင်ပေးနေသည်။ သူများတွေကထွက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ ကေးလက်ကိုလှမ်းဆွဲရင်းကျွန်မက ``ကေးသွားတော့ ကျွန်မကဖြည်း ဖြည်း ပဲနော် လို့ ပြောတော့ မင်းလုပ်နိုင်ပါတယ် လို့ ကျွန်မကိုအားပေးပြီး ကေးကထွက်သွားတယ် ကေးရဲ့ လှလှပပစကိတ်စီးပုံကို မျက်စေ့တဆုံးငေးကြည့်နေမိတယ်။ ကျွန်မကရော………..ကျွန်မက မြန်မြန်လမ်းလျှောက်ရင်၊ မိုးရွာထဲလမ်းလျှောက်ရင်တောင် မှောက်လဲလို့ ခြေသည်းခွံတွေမှာသွေးခြေဥမပြတ်ရှိသူ။ ဒူးမျာဒဏ်ရာဟောင်းတွေနှင့်။ (ဖေဖေ မရှိတော့သည့်နောက်ကျန်ခဲ့သည့်အမာရွတ်တွေ၊ ဖေဖေကကျွန်မလဲရင်ဒဏ်ရာတွေကိုပျား ရည်မကြာခဏလူးပေးလို့ ကျွန်မမှာအမာရွတ်မရှိခဲ့ဖူးဘူး) ဒဏ်ရာရမှာစိုးတာရော၊ ရှက်တာ ရောကြောင့် လဲမှာသိပ်ကြောက်သူပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ မှာကျွန်မဟာမှောက်လဲချင်နေတယ်။ ဘယ်လိုပဲလဲလဲ…. ဘာဒဏ်ရာတွေပဲရရ ကျွန်မခံယူနေချင်မိတယ်။ ဘယ်လောက်ယိမ်းယိုင်မလဲ….. ဘယ်လိုပြိုလဲမလဲ…. ဘယ်အခြေ အနေထိရောက်မှ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ဟာ တိမ်စောင်းယိုယွင်းနေတဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လိုက်ဖက်သွားမလဲ။ စကိတ်ခုံလေးသွားရာကိုကျွန်မလိုက်ပါရသည်မှာ ခက်ခဲမည်မထင်ပါ။ ပျံလွင့်သောစိတ်အစဉ် နောက်သို့ လိုက်ရသည်မှာပင်ပန်းလှသည်မဟုတ်လား။
ရှေ့မှကလေးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မစထွက်လိုက်သည်။ သူ့ ခြေထောက်တွေ ကိုလိုက်အတုခိုးရင်း ကျွန်မ၏တာထွက်ခရီးကမဆိုးလှ။ ပြီးရင် သတ်မှတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ကျွန်မစီးချင်သလိုစီးမည်။ အတားအဆီးမရှိလွတ်လပ်ချင်သူအတွက် သတ်မှတ် လမ်းကြောင်းမရှိသင့်ပါ။ ဒါမှလဲလွတ်လပ်စွာလဲပိုင်ခွင့်ကိုရရှိမည်။
စထွက်လာကတည်းကရှေ့ကိုတည့်တည့်မသွား။ ဟိုဘက်ရောက်လိုက် ဒီဘက်ရောက် လိုက်။ သို့ ပေမဲ့ မရပ်မနားပါ။ ကျွန်မရပ်လဲမရပ်တတ်ပါ။ အရှိန်ရလာပြီးစိုစွတ်အေးစက်သော လေတို့ ကခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုးဝှေ့ လာကြသည်။ကုန်းကလေးကိုအကွေ့ သစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ကို မြင်ရတော့ ကြည့်ချင်လာ၍ ကျွန်မရုတ်တရက်ရပ်ရန်ကြိုးစားလိုက်သည်။ခြေထောက်တစ် ဖက်ကိုအနေအထားအပြောင်း ခန္ဓာကိုယ်လဲကျတော့ မည်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာသိလိုက်ရသည် တကယ်လဲတော့မည်..။ကျွန်မပျော်သည်။ ဒီနေ့ သည်မှောက်လဲဖို့ ပျော်ရွှင်စွာတောင့်တနေသူ ကျွန်မ၏နေ့ ဖြစ်သည်။
ခြေထောက်တွေကအရင်မကျပဲ ခေါင်းကိုပွန်းတိုက်ခိုက်မိကာ ညာဘက်ပခုံးနှင့်ပစ် အကျတွင်။ ဘုရားဘုရား……….ကျွန်မသည်ပခုံးကိုလက်နှင့်ဖိရင်းနာလွန်း၍မျက်ရေများကျ လာသည်။ အရိုးတွေများကျိုးကုန်ပြီလား။ပခုံးအောက်ရောက်ခါစဆံပင်ရှည်အချို့ ကျိုးပြတ် ထွက်ကုန်ကာဦးရေပြားလည်းနာသည်။ ခေါင်းကိုစမ်းကြည့်တော့နည်းနည်းအိသွားပြီ။ ကျွန်မ ပခုံးကိုပဲဖိထားရမလား ခေါင်းကိုပဲကိုင်ထားရမှာလား……။ လက်တွေ့ ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပြန်မထူနိုင်သေး။ မေးရိုးနားလဲပွန်းသွားပြီထင်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင် ချက်ချင်းရေခဲကပ်ပေးရတယ်တဲ့..။ကျွန်မမေးကိုရေခဲကသူ့အလိုလိုကပ်နေပြီဆိုတော့ မဆိုးလှဘူးထင်ပါရဲ့ ။ ကျွန်မပခုံးကရော ရေခဲကပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ကောင်းသွားမလား…….။ ပခုံးတစ်ဖက်စောင်းနေတဲ့ ဒုက္ခိတမလေးကျွန်မပုံကို တွေးရင်းကျွန်မ၀မ်းနည်းလာသည်။
“ဟေးဗီးနပ်စ်လဲနေပြီကွ ရထားစီးရတာပင်ပန်းလို့ အိပ်နေသလားထင်ရတယ်စောင်း စောင်းလေး ထူပေးလိုက်ကြဦး` အသံဝါကြီးနဲ့ ဆစ်ခ်အသံကြားရတော့ကျွန်မအတိုင်းမသိဝမ်း သာမိတယ်။``ကေးရေကျွန်မကိုမြန်မြန်ထူပေးပါ ဆေးခန်းပို့ ပေးပါ` လို့ ကျွန်မအော်လိုက် တယ်။ ကေးကသူ့ ရဲ့ တုတ်ခိုင်လှတဲ့ လက်တွေနဲ့ ကြင်ကြင်နာနာကျွန်မကိုပွေ့ ပိုက်ပြီး``ရှင်ဟာ အင်မတန်ခေါင်းမာတယ်``လို့ အပြစ်တင်ပြောလိုက်တယ်။``ကေးကျွန်မအခုခေါင်းပျော့သွား ပြီလို့ ပြောရင်းဒဏ်ရာရထားတဲ့ ခေါင်းပေါ်ကိုသူ့ လက်တင်ပေးလိုက်တယ်။``အိုးမိုင်ဂေါ့ `လို့ကေးကရေရွတ်ရင်း ဂျူနိုက်ဒါကားပေါ်ကိုပွေ့ တင်ကြတယ်။
ဆေးခန်းရောက်တော့ဆရာဝန်က စစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ “ချက်ချင်းခွဲစိတ်ပြီးလက်ကိုပခုံးနား အထိဖြတ်ပစ်ရမယ်“လို့ ကျွန်မကြားအောင်အော်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်မဟာကြောက်လွန်း တာနဲ့ နာကျင်တာရောပြီးအသံတွေမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ကျွန်မကိုလူနာတွေဝတ်တဲ့ အင်္ကျီ ရှည်ကြီးဝတ်ပေးနေကြတယ်ပြီးတော့ ကျွန်မမျက်လုံးတွေကိုတစ်ခုခုနဲ့ ဖုံးအုပ်လိုက်တယ်။ သူတို့ ကျွန်မလက်ကိုဖြတ်ကြတော့ မယ်။……..မဖြတ်ဖူး မဖြတ်ဖူး။မဖြစ်တော့ ဘူး ကျွန်မ ဘုရားကိုဆုတောင်းရမယ၊်လက်တစ်ဖက်မရှိပဲ……….။``အရှင်ဘုရား`` အရှင်ဘုရား ``ကျွန်မအရမ်းအော်လိုက်တယ်။ အသံတွေကထွက်မလာဘူး။ တစ်ခါ``မေမေရေမေမေရေ``ကျွန်မထပ်ပြီးအော်လိုက်တယ်။ ``ဗီးနပ်စ် ဗီးနပ်စ်နိုးတော့လေ ``ကျွန်မနဖူးကိုလက်နဲ့စမ်းရင်းကေးကကျွန်မကိုကြောင် တောင်တောင်ငေးကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မထနိုင်ပါ့ မလားကေးရယ် လို့ ပြောလိုက်တော့ ကေး ကဘာဖြစ်လို့ လဲ လို့ ထပ်မေးပြန်တယ်။ ကျွန်မဟာဆေးရုံပေါ်မှာလေ….အိုဟုတ်ပါဘူးကေးရဲ့ အခန်းမှာပဲဟာ။``ယူ အိပ်မက်ဆိုးမက်သလား``လို့ ကေးမေးလိုက်မှ ကေးခုတင်ပေါ်က အမြန် ခုန်ထလိုက်ပြီး ကျွန်မအိပ်မက်မက်နေတာပါလားဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကိုစိမ်း စိမ်းကြည့်ရင်း ကျွန်မကိုယ်လက်အဂါစုံစုံလင်လင်ရှိတာကိုအရမ်းကျေနပ်မိသွားတယ်။ဒါ…တကယ်အိပ်မက်ပဲ။
“ယူကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ စကိတ်စီးတာတွေ အင်တာနက်ကစုထားတယ်။ယူအိပ်နေတာ နှစ်နာရီလောက်ရှိပြီ။ကျောင်းကပြန်ရောက်ကတည်းက ခုအကျီတွေသွားလဲတော့ ။ ကိုးနာရီမှ ပြန်လာခဲ့ ``ကေးကကျွန်မကျောပိုးအိတ်ကိုပခုံးမှာချိတ်ပေးရင်းပြန်ဖို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ လို့
ပြောရင်း``ကေး စကိတ်စီးရင်မှောက်လဲတတ်သလား ဒဏ်ရာတွေရောရတတ်သလားဟင်“ လို့ မေးလိုက်တော့ ကေးက ပြဿနာမရှိပါဘူးအိုကေသွားမှာပါလို့လက်မလေးထောင်ပြီးဖြေ လိုက်တော့ မှကျွန်မစိတ်နည်းနည်းအေးသွားသည်။ အိပ်မက်ထဲကလိုမဖြစ်နိုင်လောက်ပါ။ (ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရက်မှာနှင်းလျှောသွားစီးဖို့ဒီနေ့ ကျောင်းမှာသူငယ်ချင်းတွေ တိုင်ပင် ကြတယ်။ ကျွန်မက ကျွန်မရဲ့ ရင်ထဲက ဒဏ်ရာတွေ၊ပျံ့ လွင့်နေတဲ့ စိတ်တွေကိုပေါက်ကွဲ ခွင့်ပေးလိုက်ချင်တယ်။```အကယ် ၍များ ကိုနဲ့ ဗီးနပ်စ်ရေစက်ဆုံခွင့်ရခဲ့ ရင်``လို့ ရေးလိုက်တဲ့ ကိုရဲ့ စာဟာ ကိုနဲ့ ကျွန်မရေစက်မဆုံနိုင်တော့ ကြောင်း ကိုရဲ့ ကြေငြာချက်တစ်ခုပဲဆိုတာ နား လည်လာကတည်းက ကျွန်မဟာကိုနဲ့ ပတ်သက်ရင် အကြိမ်ကြိမ်လဲကျနေခဲ့ သူပဲဆိုတာသိ လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်မတစ်ခါမှမစီးဖူးတဲ့ နှင်းလျှောစီးဖို့ သဘောတူလိုက်တယ်)
စာကြွင်း။ ။နှင်းလျှောစီးဖြစ်တဲ့ နေ့ မှတော့ ကျွန်မဟာ စိတ်ရောကိုယ်ပါဘာဒဏ်ရာမှရှိမ နေချင်ပါဘူး။ရေခဲပြင်ကြီးတောင် သူ့ကိုဘယ်သူကဘယ်လိုပဲ နင်းဖြတ်လို့သွား သွား ဘာမှပြောင်းလဲမသွားတာနော်။
Posted by မောင်ဖြူ at 11:31 PM